सवारी दुर्घ’टनामा परी उप’चारत कलाकार निसा घिमिरेलाई आर्थिक अभाव, गायिका टीका सानुकाे यस्तो अपिल! , भिडियो हेर्नुहोस् (सके सहयोग नसके सेयर गराै) – Onlines Time
सवारी दुर्घ’टनामा परी उप’चारत कलाकार निसा घिमिरेलाई आर्थिक अभाव, गायिका टीका सानुकाे यस्तो अपिल! , भिडियो हेर्नुहोस् (सके सहयोग नसके सेयर गराै)
June 10, 2021 onlinestimeLeaveaComment on सवारी दुर्घ’टनामा परी उप’चारत कलाकार निसा घिमिरेलाई आर्थिक अभाव, गायिका टीका सानुकाे यस्तो अपिल! , भिडियो हेर्नुहोस् (सके सहयोग नसके सेयर गराै)
कलाकार निसा घिमिरे अहिले जिवनमरणको दोसाँधमा हुनुहुन्छ । उहाँको जीवन रक्षाको निम्ति अनेकौं सकारात्मक मनहरु विभिन्न अभियान मार्फत जुट्दै हुनुहुन्छ । उहाँको कलाकारीता राम्रो हुँदै थियो तर पढाईको क्रममा भारत जाँदा सवारी दुर्घटना भएर अहिले ओछ्याना छटपटाई रहनु भएको छ ।
सहयोगको लागि :सनराइज बैंक (शाखा)गोटीखेल ललितपुर निशाका बुवा प्रेम प्रसाद घिमिरे खाता न. 0840613613205001 मा सहयोग गर्न सक्नु हुनेछ।”सवैमा सहयोगको लागि हार्दिक अपिल” (सहयोग का लागि सिधा सम्पर्क ; कलाकार निशा घिमिरेका पिता श्री प्रेम प्रसाद घिमिरे 9851238952 )”
भाग्यले बाँ*चेकी डाक्टर समिरा: जसले खेल्दै छिन् जि*न्दगी*संग, बोल्दै बोल्दै भक्का*निन त्यो कुरा नगर्नुस (भिडियो हेर्नुहोस)
हार्दिक श्र’द्धा’ञ्जली ,प्रे’मीले फोन उठाएन भनेर प्रे’मिकाले गरिन आ’त्म’ह’त्या
DV परि अमेरिका गएका ,अस्ट्रेलिया PR पाई बस्ने ले होइन, खाडी मुलुक मा पसिना बगाई मेहनत गर्ने श्रमिक ले पठाएका हुन ५६० थान अक्सिजन सिलिण्डर
भर्खरै सारै दु*खद् खबर, को*रो*नाको दोस्रो लहर झन् ड*र*लाग्दो, एकैदिन एक हजार भन्दा धेरैमा संक्र*मण पुष्टि (जानकारीका लागि सेयर गराै)